Muxuu yahay heshiiska aan la shaacin ee uu Casemiro la galay Real Madrid? – Gool FM
(Madrid) 27 Maajo 2020. Laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee Casemiro ayaa lagu soo warramayaa inuu heshiis cusub la galay kooxdiisa Real Madrid, iyadoo bilooyin ka hor uu qalinka ka duugay heshiis gaaraya illaa 2023.
Laacibka reer Brazil ayaa kooxda koowaad joogto ka ahaa sanadihii ugu dambeeyay, isagoo xilli ciyaareedkan Los Blancos u saftay 35 kulan dhammaan tartamada.
Majaladda ugu afka dheer Spain ee MARCA ayaa daabacday in burburiyaha khadka dhexe ka ciyaara uu qalinka dul dhigay heshiis ka sameysan saddex sano oo dheerraad ah, taasoo ka dhigan inuu baaqi ku sii ahaan doono garoonka Santiago Bernabeu illaa 2023, balse kooxda Zinedine Zidane ayaa dooratay inaysan heshiiskan shaacinin.
28-jirkan ayaa qayb ka ahaa lammaanaha saddex geesoodka khadka dhexe ee ay ku wehlinayeen Toni Kroos iyo Luka Modric, kuwaasoo saddex jeer oo xiriir ah u soo gacan galiyay Real Madrid tartanka Champions League intii u dhexeysay 2016 illaa 2018, iyadoo sidoo kale xisaabta loogu darayo horyaalka La Liga oo ay kooxdood ka caawiyeen xilli ciyaareedkii 2016-17.
Xagaagii lasoo dhaafay ayaa Casemiro lala xiriiriyay kooxda PSG, hase ahaatee, ma aysan noqon sheeko sii waarta.